I-Android l: ukujongwa kobunzulu kuGoogle & apos; uhlaziyo lwamva nje lwe-android
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Android L: ukujonga ngokunzulu kuGoogle kunye neapos; uhlaziyo lwamva nje lwe-Android
I-Android L: ukujonga ngokunzulu kuGoogle kunye neapos; uhlaziyo lwamva nje lwe-Android
Njengoko uGoogle & apos; s uSundar Photosi waqaphela kwasekuqaleni kwegama eliphambili likaGoogle I / O, i-Android L yenye yezona zihlaziyo zinzulu ze-Android kwiqonga leselula kunye nembali yeapos. Ukulahla ukususa amehlo ethu kwindawo nokuba yeyesibini isahlulo, kufuneka sivume ukuba uhlaziyo, ubuncinci ukuza kuthi ga ngoku, lubonakala lubanzi kakhulu, kwaye kukho & ampos; lonke iqela lezinto ezintle esiza kuthetha ngazo ngoku, nakwiinyanga ezizayo. Nantsi into esiyaziyo ukuza kuthi ga ngoku.
Ujongano olutsha 'lweMpahla yoyilo' olugqitha kwifom yefowuni yefowuni
Enye yezona ndaba zinkulu ukuya kuthi ga kwi-Android L ichaphazelekayo, kukuyiyila kwakhona okuhle kwaye i-apl; faka iGoogle kunye neaposss OS mobile. Ngapha koko, i-Android ayizukuphela kweqonga ekufumaneni le nkangeleko intsha-intle kakhulu yonke into ephuma kuGoogle iya kudlala umdlalo omtsha, kubandakanya i-Chrome OS, i-Android Wear kunye ne-Android TV.
Ke yintoni entsha apha? Beka awona magama alula - akukho nto yoyilo isindisiweyo, kwaye nezitshixo zesoftware yokuhamba ziye zaphinda zayila (ngoku unxantathu, isangqa, kunye isikwere). Yintoni ngakumbi, inkangeleko entsha, ngaphandle kokungabinamthungo kuwo onke amaqonga kaGoogle, ikwenziwe lula ukuya ezisisiseko, kwaye ngoku icacile, inemibala ngakumbi, kwaye iyathandeka ngakumbi.
Okokugqibela okuncinci, ngendlela enkulu, yimvakalelo echaphazeleka kukubandakanywa kwengxelo ecebileyo yoopopayi kwizenzo, ezithetha ngokucacileyo, kuthetha ukuba imisebenzi ebalulekileyo, njengokucofa iqhosha, ukutshintshela ithebhu, ukutsiba ngoku, njl. Zonke ziya kuba noopopayi. Ngombulelo, konke oku kwenziwe ngokungathandekiyo kwinto esiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku, kwaye ayisiyonto ingaphaya kwamandla ethu.
Jonga ukungena nzulu kwethu kwi-Android L & apos; uyilo olutsha.
Kodwa uyilo lunye kuphela icala lengqekembe eyi-Android L, njengoko amava omsebenzisi ephuculwe ngeendlela ezimbalwa eziphambili. Masithathe umzuzwana kwaye sithethe malunga nelinye labo ngokulandelelana.
Ukukhangela kunamandla kunanini ngaphambili
Ukukhangela kuGoogle & apos; isonka kunye nebhotolo, ke akukho mntu unokumangaliswa kukufumanisa ukuba i-Android L iza kuzisa ezinye izinto kunye nophuculo kuloo ntsimi.
Umzekelo, uGoogle ubeke ugxininiso kwi & apos; ukuphinda ufumane kwakhona ', okuthetha ukuba ukuKhangela kuGoogle ngoku kuya kuba ngcono ukuba ubusenza ntoni kwangoko ngaphambi kokukhangela into kwi-Intanethi. Isiseko esinye sedemo kaGoogle & apos; d kukuKhangela & iiapos ulwazi lomsebenzisi kunye neapos zangaphambili zikaGoogle zokukhangela indawo. Lo mbuzo, owawusenziwa kwi-app eyahlukileyo kuPhando, emva koko wabandakanywa kwiziphumo ozifumanayo kunye nophendlo olufanayo, kwaye wena & ampos; uya kuba nakho ukutsiba ungene kwi-app oyinikiweyo kwaye uqale kanye apho ubuyeke khona. Yintoni engaphezulu, le API intsha iyakwenziwa ifumaneke kubaphuhlisi, ke ii -apps zomntu wesithathu ziya kuba nakho ukuthatha ithuba lokusebenzisa lo msebenzi mtsha-ayifanelanga ukuba yinkqubo kaGoogle. Oku kuvula inani leemeko ezinokusetyenziswa, kwaye ngethemba lokuba i-devs iya kusebenzisa la mandla mtsha afunyenwe kakuhle.
Imenyu yeeapps yakutshanje yenziwe ngokutsha
Nge-Android L, uGoogle naye utshintsha izinto xa kuziwa kwinto esihlala sibhekisa kuyo njengemenyu yakutshanje. Ngaphandle kwemidlalo yoyilo olwahlukileyo, ithebhu entsha yamva nje iyakudibanisa iithebhu ezikhoyo ze-Chrome zibe ngamacandelo ahlukeneyo, anokucofa, kunye nezinto. Yintoni engaphezulu, iGoogle iphinda ivule le API kubaphuhlisi, ke ukuba olo hlobo lokusebenza lusengqiqweni kusetyenziso oluthile, ii-devs ziya kuba nakho ukukusebenzisa.
Ngeliphandle, thina kunye neapos zethu zahlulwe kancinci kwibar entsha yakutshanje-ijongeka ngathi ayicwangciswanga, kwaye ngokuqinisekileyo inokubanamandla amakhulu okuba yinto enzima kakhulu, ngakumbi ukuba ukhangela kwiwebhu kwiithebhu ezininzi. Ngale nto ithethwayo, siza kulinda kwaye sibone ukuba le nto intsha iza kuphuma njani ngokwenyani.
Ukuphuculwa okubonakalayo ekuphathweni kwezaziso
Enye indawo i-Android L eya kuyichukumisa zizaziso. Apha, uGoogle uphucula ukusebenza kwezaziso ezikhoyo ngeendlela ezimbini.
Okokuqala, izaziso ngoku ziyasebenzisana ngakumbi, kwaye oku kuyinyani naxa ujonga ezo zisuka kwisikrini sakho sokutshixa. Kwi-Android L, ungazandisa okanye uzilahle ezo (nangaphezulu), kwaye uGoogle uthembise ukuba iialgorithms ziya kuzama ukukhawulezisa oko uhanjiswayo, ukuzama ukukugcina kufanelekile. Yintoni engaphezulu, ukucofa kabini isaziso kwisikrini sakho sokutshixa kuya kukuthumela kwangoko kwi-app eyichukumisileyo.
Okwesibini, i-Android L iya kwazisa oko uluntu luye lwaluqonda njengezaziso zentloko. Oku kuthetha ukuba izaziso ngoku zinokuboniswa kwibhokisi enkulu kakhulu, kwaye ziya kuhamba ngaphaya kokukwazisa nje ngebhanti encinci yesimo. Ukuba unefowuni ye-LG okanye ye-Samsung, ezi ziyafana kakhulu ekusebenzeni kwazo 'okufowunayo okujikelezayo', nokwazisa ibhokisi encinci xa umnxeba uphawulwe, ukuvumela ukuba uqhubeke nokuba yintoni oyenzayo kunye neapos, endaweni yokunyanzelwa ukuqweqwedisa amava akho. Ekugqibeleni!
I-Android L iya kuba nolwazi-ngokomxholo
Olunye ulwazi olubalulekileyo olutyhilwe ngexesha lokwenza intetho ephambili yeGoogle I / O yinto yokuba uGoogle uzimisele ngakumbi ngokwazisa umxholo kunangaphambili, kwaye, ngakumbi, indlela yokoyisa ikhaya elidibeneyo lekamva.
Singakhupha nje iibits ezimbalwa ezibalulekileyo, kodwa thina & apos; siqinisekile ukuba ulwazi oluthe kratya lusendleleni. Ngapha koko, qala, i-smartphone yakho ene-L-Android ngoku iya kuba nakho ukuxelela xa umnini wayo ekufutshane ngenxa ye-Bluetooth tether yakhe enxibekayo, njenge-smartwatch. Ukusetyenziswa kwesicelo esisebenzayo samandla afunyenwe kukuba i-smartphone yakho izakugqitha ngokuzenzekelayo iPIN / Patter-secured lockscreen nanini na xa ifumana iwotshi yakho (smart). Ukuba awuyinxibanga iwotshi yakho efanelekileyo, wena & ampos; kusafuneka ukuba uhambe ngendlela esemgangathweni, yokufaka-yokupasa-yokupasa-ikhowudi-umsebenzi othi uGoogle ubanga ukuba abantu abaninzi bachitha ixesha elininzi. Ngokucacileyo, olu hlobo lomsebenzi, ngelixa likhulula, linokubangela umngcipheko wokhuseleko.
Kwelinye, inqaku elininzi, uGoogle wakhankanya umnqweno wakhe kwikhaya eliqhagamshelekileyo (eliqhuba kwi-Android, ewe) ukuvumela utshintsho olungenamthungo phakathi kweefom zezinto. Oku kuthetha ukuba umdlalo owawudlala kwi-smartphone yakho esekwe kwi-Android okanye ithebhulethi iya kufumaneka ngaphandle komdlalo wokudlala kwi-Android TV yakho okanye kwiChannelbook yakho.
I-Android L iya kuzisa inani lokuphuculwa kokusebenza
UGoogle ukhethe ukuthetha malunga nokuphuculwa kokusebenza okufakwe kwi-Android L okokugqibela, kodwa ngokuqinisekileyo asizukucinga ezo zingabalulekanga. Kukho iinguqu ezimbalwa eziphawulekayo apha. Inye, i-Android ekugqibeleni yenza utshintsho lwayo kwigosa lokubaleka le-ART. Isibini, ngento ebizwa ngokuba yi-'Andrew Extension Pack ', uGoogle uzisa inani leziphuculo kwintsebenzo yeGPU, ethemba ukuba iya kulandela umkhombandlela wemigangatho yeconsole. Kwaye ezintathu, ngeProjekthi yeVolta kaGoogle ekugqibeleni iyaqhekeza kwii -apps ezilambele amandla ngokunika abaphuhlisi isixhobo esifunekayo ukulungisa ikhowudi yabo, kunye nokufumana idreyini yebhetri ngokulula.
I-Android L ilungile ngama-64-bit, ngoncedo lwexesha layo elitsha le-ART
Asizukuphumelela ukuzibandakanya kubuchwephesha, ke nantsi into ekuqhubeka nokuziqhelanisa. Ekuqaleni zazisiwe njengenqaku lokulinga nge-Android 4.4 KitKat, ixesha elitsha lokubaleka le-ART ekugqibeleni lilungele ixesha eliphambili, kwaye liyakuthatha indawo yeDalvik RT esele ikho. Ngamagama alula, i-ART iza kuzisa ii -apps zangaphambi kwexesha, ngenxa yoko ikhowudi iya kufakwa kwinkqubo ekufakweni, eya kuthi izise ukuphucuka okubonakalayo kwintsebenzo ngaphezulu kweDalvik, esebenzisa iJIT (nje-ngeXesha, Ithetha ukuba ikhowudi iyenziwa xa uqala usetyenziso).
Ukuziqhelanisa, uGoogle uxela ubuncinci ukwanda kwe-2x kwintsebenzo, ke iiapps ziya kufumaneka ngoku kwaye zisebenze ngcono. Ngapha koko, ii-suites ezithile zebenchmarking (umzekelo, iChessbench) zibonisa ukuphuculwa okungaphaya kwe-400%. I-ART ikulungele ngokupheleleyo ngama-64-bit, oko kuthetha ukuba izixhobo ezinamanani angcolileyo e-RAM azisekho, kungasathethwa ke ukuba uyilo lwe-chip ezingama-64 ziya kuxhaswa.
Imizobo yebakala lekhonsoli esendleleni?
Imizobo yeselfowuni kudala isale ngasemva kwidesktop, kunye nakwimizobo yeconsole. Isizathu silula-kukho & iapos indawo encinci kakhulu efumanekayo kwisandla esiphetheyo, ethintela ngokungqongqo ukuba bangakanani abenzi be-silicon abanokuyenza ngokubhekisele kwintsebenzo, ehambelana ngokuchaseneyo nokusebenza kwamandla. Nge-Android L, kunye ne-ebizwa ngokuba yi-Android Extension Pack, uGoogle unethemba lokuvala loo msantsa, kwaye asondeze izixhobo ze-Android kufutshane neekhonsoli ngokubonisa ilekese ebonakalayo abanokuyivelisa.
Ke yintoni iapos ye-Android Extension Pack? Ngokusisiseko, iseti yeempawu ezibandakanya izinto ezinje nge-tessellation, i-geometry shaders, kunye nezinye, ezinokuthi zincedise ukufika kwindawo ezinenyani, abalinganiswa, kunye nemibane ephucukileyo kunye nokubonakaliswa.
I-Android L izisa iProjekthi yeVolta kunye nemowudi yokuGcina ibhetri
Ukugcina ngesiko, i-Android L iyakusebenza njengendawo yokubonisa enye iprojekthi yokusebenza, ngoncedo lukaGoogle. Emva kweProterter Butter (Jelly Bean) kunye neProjekthi Svelte (KitKat), zombini ezijolise ekuphuculeni ukusebenza kwazo zombini izixhobo ezisezantsi neziphezulu, thina & apos; ngoku sibulisile kwiProjekthi Volta, enethemba lokuphucula ubomi bebhetri.
Iprojekthi iVolta izakuzixakekisa ngeenkqubo ezahlukeneyo ze-Android, ke izinto ezinje ngeWi-Fi kunye neeradiyo zeseli, iGPS, njl njl ziya kuphathwa ngokufanelekileyo ngobuchule obutsha bokugcina amandla ii-API. Yintoni engaphezulu, iGoogle yongeza isixhobo esintsonkothileyo ukunceda ekuboneni ukuvuza kwamandla okubizwa ngokuba yiBattery Historian. Esi sisixhobo ikakhulu sabaphuhlisi, kodwa ngethemba kufuneka sibancede bavelise ikhowudi elungileyo.
Okokugqibela, kwaye le inkulu kakhulu, i-Android L iya kuthi ekugqibeleni izise imo ekhethekileyo yeSaver Saver kwisitokhwe se-Android. Isilondolozi sebhetri sinokuqwalaselwa ukuba sisebenze kuphela xa ityala lakho lihla phantsi kwepesenti ethile (yithi<15%), or you can turn it on manually. What the energy-efficient mode does is simply limit your handset's performance by lowering processor clock speed and the display's refresh rate. According to Google, a Nexus 5 gets extra 90 minutes of juice with the new mode on. Not bad, though it should be noted that pretty much every manufacturer has implemented such a mode in their device by now. Google is a bit late to the party.
Yiza nesakho isixhobo kumalinge okusebenza vuya: I-Android L yeyomsebenzi neyokudlala
UGoogle bekulindelwe ukuba ajongane nemarike yeshishini kuGoogle I / O, kwaye khange idanise. Enye indlela yokwenza iapos eyokwenza oko nge-Android L, eya kuthi ngoku ibe sisixhobo esilunge ngakumbi kubasebenzisi beshishini. Ngokusisiseko, okwenzekileyo kukuba i-Samsung inegalelo kwikhowudi yokhuseleko lwe-KNOX kwi-Android, kwaye uGoogle wayisebenzisa kwangoko kwiL.
Ukuziqhelanisa, oku kuthetha ukuba abasebenzisi abanesoftware yamva nje ye-Android baya kuba nakho ukwahlula ngcono ubomi babo kunye nokusebenza kubomi kwii-smartphones zabo, njengoko idatha iya kwahluka phakathi kwezi ndlela zimbini. Ulwazi olungaphaya koku lunqabile okwangoku, ke thina & apos; asazi ukuba ezinye izinto ezongezelelekileyo zokhuseleko ziya kuba yinxalenye yale ndlela intsha (mhlawumbi).
Ngokwamanqanaba ayo, i-Android L ngokuqinisekileyo ingqina ukuba lolunye lolona hlaziyo lukhulu kwi-OS yeselfowuni kwimbali yayo yeminyaka emi-6. Ngaphandle kwento ebizwa ngokuba yi-Material Design overhaul, uGoogle ukwazile ukumilisela ubuninzi beetweaks kunye nokuphuculwa kokusebenza okuya kuthi kubeke indawo yeqonga kwinxalenye yesibini ka-2014 ukuya phambili.
Ngokuphandle, sasinomdla, ubuncinci kuba ukwandiswa ngakumbi kunye nezongezo ziya kuthi zifike ngaphambi kwayo kunye ne-apos; ixesha eliphambili ekwindla. Ewe, ukuwa-nangona abaphuhlisi beza kufumana izandla zabo kuhlobo lwesoftware entsha ngomso (nge-26 kaJuni), abathengi kuya kufuneka bahlale beqinile kwaye balinde iinyanga ezimbalwa ixesha elide, oko kukuthi, ukuza kuthi ga ngoku i-Android L ngokuqinisekileyo ijongeka ngathi kufanelekile ukulinda.
Ngaba u-s21 unekhadi le-sd
Umhla wokukhululwa kwe-android ka-2018
Ixabiso le-Samsung Galaxy S5 kunye nomhla wokukhutshwa
Iifowuni ze-AT & T, izicwangciso kunye neendaba
Le yayiyiselfowuni yokuqala yakwaSamsung
Ityala leKuke iPhone 7 yebhetri inokuba lukhetho olukrelekrele kune-Apple & apos; s bulging monstrosity
Ukuvuza okutsha kuthi i-Galaxy S21 Ultra ayizukukhetha phakathi kwesisombululo esipheleleyo kunye nenqanaba eliphezulu lokuhlaziya
Uyibukela nini kwaye kanjani i-2020 ye-Apple iPhone 12 5G ngo-Okthobha umsitho osasazwayo
Ngaba i-Samsung Galaxy S4 yakho iyatshisa?
Imemo yeWalmart evuzayo yangaphakathi ityhola ngokunyuka kwamaxabiso e-Apple iPhone 6s (QAPHELA: IWalmart yenze itypo)
Umhla wokukhutshwa kwe-iPhone 13, ixabiso, amanqaku kunye nokuvuza
Imbali ye-Apple iPhone: indaleko ye-smartphone eyayiqala yonke loo nto